I-Stanozolol powder yokwakha umzimba: i-16 inyaniso kufuneka uyazi !!! | AASraw
I-Stanozolol powder yokwakha umzimba: i-16 inyaniso kufuneka uyazi !!!
/Blog/Stanozolol , iphumelele , winstrol/I-Stanozolol powder yokwakha umzimba: i-16 inyaniso kufuneka uyazi !!!
ezaposwa ngomhla 01 / 07 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Stanozolol, iphumelele, winstrol. Ibe 1 Comment.
1.Stanozolol Powder / Winny Powder / winstrol Powder 2.Yintoni i-Stanozolol Powder / Winny Powder / winstrol Powder?
3.Stanozolol Powder / Winny Powder / winstrol Powder? 4.Usebenza njani i-Stanozolol Powder / winstrol Powder?
5.Ziziphi iinzuzo zeStanzolol Powder / Winstrol Powder? 6.Help muscle ukufumana / Stanozolol ukwakha umzimba
7.Stanozolol Isisindo sokulahlekelwa I-8. Ukugcina i-nitrogen nokugcina iprotheni
9.Gcina ibhalansi yeepoprotein level 10
11.Stanozolol Powder / winstrol Inzuzo yePowder I-12.Imitha ye-Stanozolol Powder / Winstrol Powder (ngokubhekiselele)
I-13.Off-Ixesha le-Stanozolol Powder / winstrol Umlinganiselo wePowder kumntu I-14.Off-Ixesha le-Stanozolol Powder / winstrol I-Powder Isilinganiso somfazi
15.Male Ukusika I-Stanozolol Powder / winstrol I-Powder Dose 16.Female Cutting Stanozolol Powder / Winstrol Powder Dose
17.Yintoni i-side effect of Stanozolol Powder / winstrol powder? 18.Ukuphepha njani iStananol Powder / winstrol Impembelelo yePowderside- Ukujongana noTywala?
19.WStanozolol Powder / Winstrol Powder Results 20.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePowder ye-Bulking
21.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePower for Cutting 22.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePowder zeBafazi
23.Ukuphi ukuthenga i-Stanozolol Powder / ukuthenga i-Winstrol Powder online? 24.Bheka ukuhlambuluka okuphezulu ukuthenga iStananol Powder / ukuthenga i-winstrol Powder online kwi-AAS
I-Stanozolol, ebizwa ngokuba yiWinstrol, winny, i-anabolic steroid esetyenzisiweyo Ukulahlekelwa ngamatye kwaye ukufumana imisipha, Kwabaninzi abasebenzisi, yindlela engabizi ukuya ku-anavar, eyona nto yayiyi-3 yokusika i-steroid kwimarike. Stanozolol powder yinto ebonakalayo ye-Stanozolol, luhlobo lomgubo omhlophe, kwimarike intengo ye-Stanozolol powder ikhuphisana kakhulu, ngokuqhelekileyo, i-10g stanozolol inokwenza ama-tablet angamawaka, yingako abaninzi abantu uthenge i-Stanozolol powder online Ukusuka kwi-Stanozolol i-powder powder umthengisi. Kwimakethi, kukho nezinye iifom ezahlukeneyo, njenge-stanozolol yomlomo, i-stanozolol, i-stanozolol iiphilisi, i-stanozolol injectable, i-ect. Yonke isenziwa kwi-Stanozolol powder eluhlaza.
2.Yintoni i-Stanozolol Powder / Winny Powder / winstrol Powder?
I-Stanozolol Powder / winstrol Powder yi-anabolic steroid esetyenziselwa ukuba iphile kwaye ikhuni, isetyenziswa kakhulu njengomlomo ngexesha lokujikeleza kulahlekelwa ngumzimba. Kufana nokuhluka kweDihydrotestosterone (DHT), ngoko unokulindela ukulahlekelwa kwintlawulo efana neyofana nanjengayiphi na enye i-DHT derivative steroid. Kwabaninzi abasebenzisi, yindlela engabizi kangako ku-anavar, yaye, ngokuqinisekileyo, ikhona ngakumbi kwimarike emnyama. Ngenxa yokuguqulwa kwi-A-ring, le steroid eyingqayizivele kakhulu, enezakhono eziqhelekileyo zokusika. Oku kwenza winstrol i-3 yokusika i-steroid kwimarike.
I-Stanozolol Powder / winstrol I-Powder inekhono ekhethekileyo lokunciphisa inani le-glomin-binding ye-hormone (SHBG), ngaphezu kweyiphi enye i-steroid kwimarike. I-SHBG i-hormone ebophezela kwezinye i-steroids kumjikelezo wakho ukwenza ukuba kungabalulekanga; ngokwemigca elula, yenza ukuthatha i-steroids kakhulu kungabalulekanga njengoko kungabalulekanga. Nangona kunjalo, i-stanozolol ikuvumela ukuba ulandele i-steroids ezininzi kumjikelezo wakho ngaphandle kwemfuneko yokunciphisa amayeza akho. I-stack ezithakazelisayo ziza kuba yi-winstrol kunye ne-proviron, okuvumela ukunciphisa kwe-SHBG kunye nokwenza ngcono umjikelezo wokujikeleza.
I-Stanozolol ipoda eluhlaza yinto ebonakalayo ye-Stanozolol, luhlobo lwe-powder omhlophe, i-CAS: i-434-07-1, i-Formula ye-molecular C21H32O3, isisindo seModeli: i-332.48, i-Melt Point: i-172-180 ° C, iStanozolol idla ngokugcinwa kwigumbi, kwiimarike intengo yeStananol powder eluhlaza yinto ekhuphisanayo ngokuqhelekileyo, ngokuqhelekileyo, i-10g stanozolol inokwenza amawaka amacwecwe. uthenge ukucoceka okuphezulu eStananol powder ukusuka eStananol powder oluhlaza oluvela kumthengisi we-Stanozolol powder, ekwenzeni amacwecwe e-stanozolol, iipilisi, iigciwane.
4.Usebenza njani i-Stanozolol Powder / winstrol Powder?
Iintlobo zeStananol zokwakha umzimba, kodwa zisebenza njani ngokuthe ngqo?
Njengoko kuthethwe ngaphambili, i-stanozolol ipowder eluhlaza ngokuqhelekileyo ithathwa ngomlomo njengendlela yePlanozolol iipilisi, i-capsule. Kwaye inqabile phakathi kwe-anabolic steroids ekubeni iyakwazi ukumelana nesondlo sokutya, kuquka ukuphulwa kwesibindi. Qaphela ukuba i-steroid yejectject inesakhiwo esifanayo steroid yomlomo. I stanozolol ithandwa kakhulu ngenxa yokuba ibophelela kwi-androgen receptors ukuze isebenze emzimbeni. Ukuba nobudlelwane obuphezulu bokubopha kwi-hormone ye-Binding Globulin (eyaziwa ngokuthi yi-SHBG), unokuba nezinga eliphezulu kakhulu le-stanozolol kwisistim sakho ukuphucula imiphumo kunye nokusebenzisana nezinye iziyobisi.
Ikhono le-stanozolol ukuvelisa iprotheni yeso sizathu sokuba kuthenjwa njengokuba kunjalo. Yenza kube ngokukhethekileyo ukwakha ubunzima bomzimba. Oku kuthetha ukuba ufumana izihlunu ezinzima ezikhokelela ekulahlekeni kwintsizi ngokugqithiswa kokuba ngaphezulu kwezinto kwaye ngokuqhelekileyo zichongiwe. Ngokungafani nezinye i-anabolic steroids, i-stanozolol ayinakukwazi (ngokubulela kwi-molecular molecular design) ye-estrogen. Kuthetha ukuthini ukuba kukho umngcipheko omncinci (ukuba kukho na) yeempembelelo zesigxina se-estrogenic. Izinto ezinjengokukhula kwebele akungazwanga.
5.Ziziphi iinzuzo zeStanzolol Powder / Winstrol Powder?
Iingenelo eziphambili kakhulu ziyimpumelelo eyenziwa ngabadlali be-athlete - ukunyuka kwama-muscle kunye nokunyathela okukhulu ngokubanzi ngamandla. I-Stanozolol ikhuthaza ukuveliswa kwe-RBCs (amangqamuzana egazi abomvu, awaziwa ngokuba yi-erythrocytes), evumela ukuba kube lula ukudluliselwa kwe-oksijini ngegazi. Uxinzelelo oluphezulu lwe-oksijini emzimbeni womzimba lunempembelelo enkulu kuyo yonke imisebenzi yomzimba (ukubaluleka kwayo akuyi kubuzwa). Ngoko ke, ukunyamezela ngokubanzi kuphuculwe kwaye unako ukusebenzisa ixesha elide ngaphandle kokukhathala; Ixesha lakho lokubuyisela imisipha liyabonakala lifutshane.Kanjalo, iintlawulo ze-Stanozolol ziquka:
6.Help muscle ukufumana / Stanozolol ukwakha umzimba
I-Stanozolol esetyenziswe ngexesha lokutya okanye isigaba sokusika sihle kakhulu ekugcineni ubukhulu besisu.
Abaqulunqa umzimba baya kufumana le steroid inenzuzo gqitha kwezi zigaba kuba ngamanye amaxesha kunzima kunzima ukugcina ukuzuza okwenziweyo ngexesha lokubhikisha.
Yonke into encinci yobunzima obuya kugcinwa ngokubala emva kokuba ukhuphiswano luqala. Nawuphi na umdlali osebenzisa le steroid ngexesha lokutya ukutya uya kubona iintlobo ezininzi zeStanzolo kunye nemiphumo emihle njengoko inceda umzimba ukuba ubonakale ungcono.
7.Stanozolol Isisindo sokulahlekelwa
I-Stanozolol yokulahleka kwesisindo esisetyenziswe ngexesha lokutya okanye isigaba sokusika siphumelele kakhulu ekugcineni ubukhulu besisu .Abodybuilders baya kufumana le steroid inenzuzo kakhulu kule miqathango kuba ngezinye iimeko kunzima kakhulu ukugcina ukuzuza okwenziweyo ngexesha lokukhupha. ubunzima obuya kugcinwa xa kubalwa ukhuphiswano. Nawuphi na umdlali osebenzisa le steroid ngexesha lokutya ukutya uya kubona iintlobo ezininzi zeStanzolo kunye nemiphumo emihle njengoko inceda umzimba ukuba ubonakale ungcono.
Nangona i-anabolic steroid ingabancedi umzimba ukuba uphelelwe ngamathambo angenza umphumo awuzange ugcine amanqatha omzimba.Ukunceda ukugcina ubunzima bemisipha yakho imetabolism iya kuba phezulu. Ukwenza kube lula ukutshisa amafutha ngaphandle kokulahlekelwa nayiphi na imisipha.
I-8. Ukugcina i-nitrogen nokugcina iprotheni
Enye yezona zinzuzo ezinkulu zeWinstrol kukuba abasebenzisi abakubongayo banokulindela ukujonga okubonakalayo kumzimba xa umzimba weoli uphantsi. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe njengesigqirha sokujikeleza izidakamizwa, iStananol inokukwazi ukuphucula ukugcinwa kwe-nitrogen kunye neprotheni ekuqaleni. Ukusetyenziswa kwesi sixhobo sokwandisa ukusebenza kudibaniswa neetonons eziqinisiweyo kunye nemigqa.
UWinny unempembelelo enkulu kwizinga le-hormone-ebopha i-globulin emzimbeni kwaye unokuthintela okwethutyana ama-hormone e-steroid ekusebenziseni imisebenzi yabo, ngokukodwa ngenxa yeempawu ze-plasma ezibophayo. Ngokwenza oku, uWinstrol ukhokelela kwipesenti ephuculweyo ye-testosterone ehambahambayo emzimbeni onokuphucula ukusetyenziswa kwe-anabolic steroids ngokufanayo.
9.Gcina i-bala ye-lipoproteins level
I-Winstrol inokunciphisa izinga leepoprotein ephezulu kunye nokuphakamisa izinga leepoprostin ephantsi. Ukusetyenziswa kweWinny kunxulumene nokunyuka kwama-lipoprotein kunye nokunciphisa i-lipoproteins ephezulu kunye nokusebenza ngokulawula ukuhamba kunye nokukhawuleza kokuhlaselwa kwe-angioedema kunye nokwandisa izinga le-serum ye-C1 INH ne-C4. Ukuchonga njengezinto ezilawulwa phantsi kwe-Anabolic Steroids Control Act ye-1990 kwaye yabelwa kwiShedyuli III, iimpembelelo ze-Winstrol ekuphuculeni izinga le-serum ye-C1 INH ne-C4 kubangelwa ukwanda kweprotein enebolism.
Xa kuthelekiswa nezinye i-anabolic sterodis, njengoAnavar, uStananol unempembelelo engaphantsi, yintoni eyenziwa kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba.
I-Stanozolol ayiguqukanga ibe yi-estrogen ngumzimba, amadoda akudingeki akhathazeke ngeengxaki ezinjengeGynecomastia (ukuphuhliswa kwamabele amabhinqa) .Khona, iStanano yabasetyhini, Abanye besetyhini bakhetha ukuthenga stanozolol ngenxa yokuba kuninzi kunye ne-androgenic xa kuthelekiswa nezinye i-anabolic steroids.
Nangona kunjalo, Enye yeenzuzo ze-Stanozolol kumzimba womzimba kukuba ayiyi kubangela ukugcinwa kwamanzi njengamanye ama-anabolic steroids. Ngaloo ndlela gcina i-look and cut cut look efunwa ngabaninzi bomzimba. Oku kwenza kube yinto ekhethwa ngabantu abaqulunqa umzimba.
11.Stanozolol Powder / winstrol Inzuzo yePowder
Zininzi iintlobo zeefom kwiimarike malunga neStananol, iipilisi kunye ne-liquid (for injection), powder. Phakathi kwezi, iStananol iphezulu kakhulu.
Ukuze uhlambuluke, xa uthengela i-stanozolol amaphilisi kwisitolo, ucoceko lwe-stanozolol luhlala luphantsi, bangela ukuba iipilisi zixutywe nezinye izinto. Kodwa xa uthengela i-99% yobungqina kwi-steroids ye-powder umthengisi, ukungahlambuluki kungabi ngaphantsi 98%.
Ixabiso, iipilisi ze-stanozolol kwivenkile zihlala zibiza i-30 USD = iipilisi ze-100 (i-10 mg / ithebhu), okanye i-70USD = iipilisi ze-100 (i-50 mg / ipilisi), kodwa uyazi, kumthengisi we-powder steroids, njenge-SZOB, ngokuqhelekileyo i-45USD / 10g = 200pills, yintoni inzuzo enkulu!
I-12.Imitha ye-Stanozolol Powder / Winstrol Powder (ngokubhekiselele)
i-stanozolol iphumelele kakhulu kwi-50 mg ngosuku (ngamadoda) kunye ne-5mgs ngosuku (kubafazi) kwiiveki ze-6. Umsebenzisi uya kufumana ukuba ukudlulela kweli dosi aliyi kuzisa amaninzi amaninzi, kodwa kuya kubangela iziphumo ezingaphezulu. Olunye uhlobo lwe-dosing lokuqwalasela lusehlisa idosi kwi-25 mg ngosuku ngamadoda kunye no-2.5mgs ngosuku ngamabhinqa. Le patheni iphethini ingabonakala ikhuselekileyo, kodwa ukuba igijimene ngokubambisana ne-stack efanele, inokusebenza ngokugqithiseleyo. Kule dosi emodareyithwa, uya kuba nako ukukhawulelana nemiphumo emibi, ephumelele kakhulu kuyo yonke imiba yomjikelo ngenxa yokunciphisa imiphumo emibi.
I-13.Off-Ixesha le-Stanozolol Powder / winstrol Umlinganiselo wePowder kumntu
I-horano i-Stanozolol inganciphisa kakhulu i-SHBG kwaye yenze impembelelo enhle ye-synergetic kunye nezinye i-steroids ezisetyenziswayo. Ukongezelela, nangona kungekho bungqina obunzima, abaqhubi abaninzi bokusebenza baxelele ukusetyenziswa ngexesha lomjikelezo wexesha eliza kusinceda ukuqiniswa kwemali, kwaye ukuba oku kuyinyaniso ingamkelwa. Nangona kunjalo, simele siyikhumbule le steroid enobuthi enesibindi, kwaye ngaloo nto ingqondweni yinto efanelekileyo ekusebenzeni ngezinye iinjongo ukwenzela ukuba kungabangela ukuba uxinzelelo olungapheliyo kubindi. Kukho nawuphi na, ukuba unquma ukusebenzisa iStananol kwinqanaba lakho lexesha elide uya kulufumana lilungele ukusebenza ekugqibeleni. Amanqanaba eWinstrol kwi-50mg yonke imihla ngemihla malunga nee-4-6 iiveki ziya kuba ngaphezu kokwanele ukudala umphumo owufunayo kunoma yimuphi umntu.
I-14.Off-Ixesha le-Stanozolol Powder / winstrol I-Powder Isilinganiso somfazi
Ngelixa iStananol ayiyona eyakhiwa yindoda enamandla kunesistim sokusebenza komntu, kodwa ayifani neyabesifazane. Abafazi banomdla kakhulu kwi-steroid, kwaye ngelixa liza kubaxhamla ngokuyinxalenye kwezinye iimjikelezo kuya kuba luncedo kakhulu kubafazi xa ukubetha kunokuqhathaniswa namadoda. Ukuba isetyhini iyakwazi ukunyamezela i-10mg ngosuku lwe-Winstrol izilingo ezi ziza kubeka ipakethe kwezinye izicubu ezintle ezintle, kodwa abanye banokuba neengxaki kwaye banyanzelekile ukuba bagcine kwi-10mg yonke imihla. Ngaliphi na inqanaba, nangona kule dose ephantsi, ukuba iimpawu zokuhlaziya ziqala ukubonisa ukuba ukhuthazwa ukuyeka ukusebenzisa.
15.Male Ukusika I-Stanozolol Powder / winstrol I-Powder Dose
Ixesha lokunquma lixesha elona lihle kakhulu lokuba indoda iqhubeke ne Winstrol; eqinisweni, ingaba enye yezona zinto ezilungileyo zokusika zonke izinto. Ukufumana inyanzelwane kunye ne-granite njenge-physique, iStananol inokuthi ibe yinxalenye yempendulo ngokupheleleyo. Amadoda amaninzi aya kufumana i-Winstrol i-50mg ngosuku ngosuku lokugqibela lwee-6-8 zeveki eziza kufezeka. Kulabo abakhuphisanayo kumncintiswano wokwakha umzimba, akusiyo ingcinga embi yokwandisa i dose ku-100mg ngosuku ngosuku lokugqibela lwe-10-14 ngaphambi kokubonisa. Oku akusiyo umthamo sifuna ukuqhuba ixesha elide, ngokuba idosi elinjalo kwiiveki ekugqibeleni liya kubangela uxinzelelo olukhulu kwisibindi, kwaye ukuba isibindi sakho asiphilisanga awuphilile.
Ngaphandle kwembuzo, u-Anavar nguye oyona ophezulu we-anabolic steroid kubasetyhini, kodwa i-stanozolol inokukhetha kwakhona. Iingxaki zeempembelelo ezichaphazelekayo ziphezulu kunye ne-stanozolol kunokuthelekiswa no-Anavar, kodwa uninzi lwabasetyhini abancedisayo ngokufanelekileyo luya kuba luhle. Abasetyhini abancedisa nale steroid ngenjongo yokusika baya kufumana inzuzo efana namadoda. Umzimba wabo uya kuba nzima kunye kwaye baya kugcina ezininzi izicubu kunye namandla ahlala elahleka ngokutya okulula. Ukufezekisa oku kuphelisa, ubuninzi beebhinqa zabasetyhini baya kufuna kuphela i-Winstrol doses ye-10mg yonke imihla ngemihla, kunye neeyunithi ze-5-6 zokusetyenziswa zize zanele.
17.Yintoni i-side effect of Stanozolol Powder / winstrol powder?
I-1.Low i-Stanozolol ibakala inokuchaphazela ixabiso le-enzyme yesibindi, yandisa iprotrate kwaye ingalunganga
cha phazela amaqondo e-cholesterol.
I-2.Abuse yeStanozolol inakhokelela ekwandeni kwe-BSP (bromsulphalein) ukugcinwa kwamazinga, i-SGOT kunye
I-3. Ibomvu okanye i-prostate umdlavuza akufanele isebenzise iStananol njengoko ingavuselela imveliso yeselfowuni.
I-4.Night sweats, insomnia, ukunyanzelwa kwe testosterone, ukulahleka kweenwele, i-acne kunye neentambo
ingxelo ngabantu abasebenzisa iWinstrol Stanozolol.
I-5.Anyathelo lomzimba we-Stanozolol lilinganisa ukunika abasebenzisi "elomileyo" okanye amanxeba abuhlungu.
I-6. Kwizigulane zezilwanyana ukusetyenziswa kwe-anabolic steroids kuye kwaphumela ekuhlaleni, ngoko ke stanozolol
Isiphumo siquka ilizwi elinzulu, i-hirsutism, i-acne, i-clitomegaly (engabuyiselwayo), kunye nokuya esikhathini.
18.Ukuphepha njani iStananol Powder / winstrol Impembelelo yePowderside- Ukujongana noTywala?
I-Stanozolol Ipowusi eluhlaza / winstrol Ubuncwane bubhekwa kakhulu nge-hepatotoxic, oku kuthetha ukuba kuya kubonakalisa isibindi sakho ngexesha. Xa uthatha ixesha elide, kwaye emva kokuba uthatha ixesha elide, umonakalo omkhulu uya kukwenza. Kubalulekile ukulandela izikhokelo zemiyalelo ngokucokisekileyo. Sebenzisa i-dose ephakanyisiweyo kwaye uqaphele ubude bomjikelezo wakho ukunciphisa iimeko ezinobindi. Kukho amanye amathiphu amcebisi ancedo anokunceda ukunciphisa ingozi kwakhona:
1.Ngeke usebenzise enye i-steroid yomlomo kwisigxina seWinstrol. Phantse zonke i-steroids zokusetyenziswa komlomo zi-hepatotoxic ngenxa yemvelo yazo. Ngenxa yoko, akufanele usebenzise amaninzi omlomo we-steroids kumjikelezo.
2.Ungasayi kusela iiveki ezimbini ngaphambi kwexesha, ngexesha, kunye neeveki ezimbini emva komjikelo wakho. Ukudibanisa utywala kunye neWinstrol kunokunyusa kakhulu umonakalo wesibindi.
3.Stay hydrated. UWinstrol uyanqwenela ukuwomisa, kwaye uya kuziva oku kumalungu akho. Usenokuvakalelwa ngokukodwa xa unxaniwe ngexesha lomjikelezo wakho. Ukusela amanzi amaninzi kuya kunciphisa oku, kwaye kulungile nesibindi sakho.
4.Sebenzisa isongezelelo. Unokufumana izilwanyana ezininzi kwivenkile yezilwanyana eyenzelwe ukukhuthaza impilo yesibindi. Umlenze womlambo ungenye yezona ziyaziwayo kwaye zifundwe kakuhle.
5. Yenza ikhefu phakathi kwimijikelezo elingana nobude bomjikelezo. Ukuba usebenzisa i-Winstrol kwiiveki ze-10, thatha ikhefu le-10-veki ngaphambi kokuba usebenzise enye i-steroid ebonwa njengobuthi onobuthi. Oku kuya kunika umzimba wakho ixesha lokuphilisa.
Iziphumo zeWinstrol ziyahluka kakhulu ukusuka kumntu ukuya kumntu kuxhomekeka kwizinto ezinjengezilwanyana, ukutya, ukuzivocavoca, kunye nemfuza yemfuzo, Gcina ukhumbule ukuba i-stanozolol ayiyiyo ipilisi yokutya kwaye ayiyi kukunceda ulahlekelwe ngumzimba okanye ungakhe umsila xa ungayifaki emsebenzini . Abanye abagijimi baye baxela ukulahlekelwa yi-5% yeoli yabo yomzimba kwisigidi esisodwa se-Winstrol, kwaye le nto xa isetyenziselwa ukudibanisa nokutya okufanelekileyo kwaye emva kokuhla kwe-15% ngamafutha omzimba ngokwemvelo. Abasetyhini banokulahlekelwa kwi-3% yeenqatha zomzimba ngendlela efanayo. Ezi ziphumo azibonakali kumntu wonke, nangona kunjalo, kwaye umzimba wakho wesimo semetabolism senza indima kuloo nto. Iinkcukacha zeStanozolol Powder / Winstrol Powder Iziphumo zifana:
20.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePowder ye-Bulking
I-Stanozolol Powder / winstrol I-Powderol ayilona i-agent-gaining agent njengezinye i-anabolic steroids, ezithi iTesttosterone, uSustanon 250 kunye noD deca Durabolin. Iziphumo ze-Stanozolol / Winstrol ziphezulu zomzimba ezixhambileyo (LBM) ngenxa yokungabi namanzi okugcina okanye ukuqhaqhaqhayisa okuvela kuWinstrol. Ukuba yi-DHT etholakala i-anabolic steroid, ukunciphisa kwe-SHBG kubonakala nakubasebenzisi baseWinstrol, oku kuthetha ukuba kukho iTestosterone ehamba phambili ekhululekile ekhoyo ukunyusa isisu kunye namandla. Amandla okuzuza ngenye yeziphumo zokuqala ze-Winstorl eziye zenzeka ngokwenene kwaye ngenxa yokuba umsebenzisi we-anabolic steroid unokunyusa ubunzima obuninzi uya kunceda ekunyuseni nasekubunzeni izicubu ze-muscle.
Ukufumana amandla okuphuma kwiWinstrol kuya kukhawuleza kwaye kuninzi kune-anabolic steroids, eyenza uWinstrol abe ngumthandayo kunye nabadlali. Imidlalo yezemidlalo apho isivinini kunye namandla zizinto eziphambili zithetha ukuba ukusebenzisa i-Winstrol kuya kunceda umsebenzisi. Oku kwaqinisekiswa nguBen Johnson ukhetha iWinstrol ukuba isebenzise ekupheleni kwe1988 100m Olmypic eSeoul apho uBen Johnson wabeka irekhodi elitsha lehlabathi, kodwa wavinjelwa emva kokuvavanywa kwe-Stanozolol. Ngokubanzi, iziphumo zeWinstrol azikho zihlunu ezinkulu kunye neStanzolol ayisetyenziswanga ngokukhulu, kodwa isantya kunye namandla. I-Winstorl iifayili ukusuka kwi-40-80mg imihla ngemihla kuxhomekeke ekubeni ingaba umlomo okanye injectable version ifakiwe okanye injected. I-Oral Winstrol ayifumanekanga njenge-bio-injini ebizwa ngokuba yi-Winstrol ngenjengoba i-dose ephakamileyo iphakanyisiwe.
21.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePower for Cutting
Siye saqinisekisa ukuba iziphumo zeWinstrol azikho ukunyuka okukhulu kwimizimba yesisundu okanye ukunyuka kwi-muscle ephilileyo ngexesha elifutshane kodwa uzuzo olumgangatho ophezulu nolusetyenziswa kakuhle njengenxalenye yamandla okanye amandla emidlalo. Ngoko yintoni enhle ngaphandle kwamandla? Eyona nto ihamba kakuhle njengengxenye yomjikelezo wokusika ngenxa yokunyuka kwayo ekunqumeni amaninzi emzimbeni okanye ekuncediseni umgqugquzeli womzimba okanye umsebenzisi ukugcina ubunzima be-muscle xa kukho ukungena kwekhalori. Imiphumo ye-Winstrol yinto enhle ngokwenene, ukuba i-Winstrol isebenzise ixesha elide njengenxalenye yomjikelezo wokusika okanye ngexesha lephambi kokuncintisana. I-Stanozolol isetyenziselwa umthamo ophezulu kunye nezinye i-anabolic steroids ezingenakusikiyo kwiiveki zokugqibela zamagqabantshintshi kwangaphambi kokuncintisana njengoko izomisa umzimba kwaye zenze umphumo onzima.
I-Stanozolol Powder / winstrol Iziphumo zePowder zifika ngokukhawuleza njengoko zinemizuzu emfutshane ye-10-24 iiyure kuxhomekeke ekubeni ngaba ifomathi yomlomo ithathwa okanye isilungiso esilungeleyo. I-Winstrol iifayili zokujikeleza okanye izigaba zincinci kunezikhuni zokuxubha ngenxa yokujolisa ukulahleka kweendyebo ngokutya, i-cardio kunye noqeqesho kwaye kungekhona ngokusebenzisa i-anabolic steroids. I-Anabolic steroids, efana ne-Winstrol isetyenziselwa ukulondoloza inani lemisipha yomsebenzisi xa iikhalori zingaphantsi kwesondlo.
Eli lixesha apho umzimba ungasebenzisa i-amino (i-muscle) njengamafutha kunye nokungabi ngaphezu kwamanqatha omzimba, ukunqoba into yokukhawulela kwangaphambili. Kanye nokugcina imisipha, i-Winstrol iya kwandisa izinga apho umsebenzisi we-steroid elahlekelwa esiswini, isisceral kunye ne-systemic adipose tissue ngokuphakamisa imetabolism yomsebenzisi. Amanqanaba e-Winstrol yokusika aphakathi kwe-40-60mg imihla ngemihla. Kwakhona, ukuhlukahluka komlomo kaWinstrol kufuneka kulungiswe ngokukodwa ngenxa yokulahleka kokungabikho. Amanyathelo kufuneka athathwe ukuze umntu abone i-Winstrol yeziphumo eziqhelekileyo kunye nomsebenzi wayo oyintloko kunye nomsebenzi.
22.Stanozolol Powder / Winstrol Iziphumo zePowder zeBafazi
Imiphumo yeWinstrol yabasetyhini inokuba yinto entle kwaye ihlala ithatha idonsa encinci ngemini ukuba iphumelele kwi-Winstrol yeziphumo zendoda. Abasetyhini banomdla ngakumbi kwi-anabolic steroids kunamadoda, ngoko ke isicatshulwa se-dose sisebenzisayo yindoda. I-Winstrol iifayili ze-10-15mg imihla ngemihla inokukhokelela ekuzuzeni okumangalisayo kumzimba we-muscle nokunciphisa amafutha omzimba. Ngenxa yokuba abafazi banomdla ngakumbi kwi-anabolic steroids kunabantu abazilumko ukuhlala kude ne-androgenic anabolic steroids, ngoko ke uWinstrol uyinto ekhethekileyo, kunye no-Primobolan no-Anavar.
Ezi anabolic steroids zikhuselekileyo kubasetyhini kunezinye i-androgenic kunye ne-anabolic steroids. Ukuba iziphumo zeWinstrol zibi kunye namava emibi, ukuphela kweStanzolol kukwaziswa ngokukhawuleza. Iimpawu ze-virilisation zihlala zingenakwenzeka kwaye zihlala zikhuni kunzima ukulungisa emva kokuba zibonakalise, kodwa oku akunqabile kwii-dose ezikhuselekileyo kunye neengqiqo. Iimpawu zokubakhombisa ukukhula kweenwele zomzimba, ukunyaniseka kweengoma zomlomo, ukwandiswa kwezitho zesini kunye nobunqunu. Ezinye iimpembelelo ze-Winstrol zingaba zi-acne, ubugwenxa kunye noshintsho kumjikelezo wesini wabesifazane.
23.Ukuphi ukuthenga i-Stanozolol Powder / ukuthenga i-Winstrol Powder online?
Sisoloko sikwazi ukubonwa ngolo hlobo, oko kukuthi xa kulungiswa i-stanozolol kwi-intanethi, ngokuqhelekileyo iimpahla ezikhohlakeleyo, okanye ucoceko luphantsi kakhulu kunomgangatho, ngoko ke, indlela yokukhetha umgangatho ophezulu we-stanozolol, ukhetha umthengisi othembekileyo we-steroids kakhulu kuyimfuneko.
Ukuba sele sele unomthengisi wakho onokwethenjelwa, oko kulungile.Ukuba kungenjalo, oku kuza kukukhetha kwakho okuhle, AASraw. Ikakhulukazi kumthengisi we-steroids, abo bafuna ukufumana umthombo onokuthenjelwa nokuzinzileyo wokubonelela, onokuqinisekisa ukuba uphuculo oluphezulu kunye nobungakanani bonikezelo, luncedo kakhulu ekuphuhliseni ishishini, i-AASraw yenza ukuba kwenzeke.
24.Thenga ukuhlambuluka okukhulu ukuthenga iStananol Powder / ukuthenga i-Winstrol Powder online kwiAAS
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory kwi-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakamileyo kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroid , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, i-hormone zesondo, i-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Ukuba unquma ukuthenga i-stanozolol ipowder eluhlaza esuka kwi-AAS, izinto omele ukwenze yile:
1.Vakalisa iwebhusayithi yethu, ukhethe iimveliso oyifunayo, kwaye ushiye umnxeba wakho kunye nomyalezo kwiwebsite yethu, uze uthumele, IiNkonzo zethu zabaThengi ziza kuphendula kwiiyure ze-12 emva kokufumana umyalezo wakho, ngoko uthetha ngeenkcukacha.
2.Thumela i-imeyli okanye uthumele imiyalezo kwi-whatsapp kubantu abasebenza kwi-AAS, njengeDemi, bathetha ngokucacileyo, malunga nokuhlanzeka, ubuninzi, Ukuthumela, idilesi, ukhethe intlawulo efanelekileyo, iimpahla zingathunyelwa ngaphandle kweeyure ze-12 emva kokuhlawula , emva kokuhlawula, uya kufumana inombolo yokulandelela, kwaye umthengi wethu uya kukugcina ngexesha elifanelekileyo, ngoko kufuneka uhlale phantsi ngokukhawuleza, ulinde iplasela yakho.
tags: Stanozolol Powder, Powder, Winstrol Powder
Kuphi ukuthenga ubungcwele be-stanozolol powder?
Iingxelo zeempendulo ze1
Vagelis07 / 14 / 2018 kwi-3: 36
Nceda ujonge i-powder stanozolol kwaye zingaphi iintsuku ndinazo i-powder ngesi-grreece
Ukunciphisa ukulahleka kokulahleka: Luhlobo luni lokulahleka kwesisindo oluphambene nawe?	I-Tadalafil ipowder for sale: Indlela yokukhetha umthengisi we-tadalafil?